Sonos Arc na-enweta Multichannel LPCM na New Black Friday Deals | Akụkọ akụrụngwa
Arc adịla ngwa ngwa bụrụ ọkacha mmasị nke ụda dị oke ala maka TV, ihe nkiri, egwu, egwuregwu, na ndị ọzọ. Site na mmelite ohuru ohuru, Arc na-akwado LPCM ọtụtụ ọwa, na-eweta ahụmịhe ọhụụ gbara gburugburu maka egwuregwu, diski Blu-ray, na ndị ọzọ. Iji nweta nkwado maka ọtụtụ LPCM na Arc, ndị ahịa ga-emelite Sonos sọftụwia kachasị ọhụrụ ewepụtara ụnyaahụ na ụlọ ahịa ngwa, dị na nhazi Arc niile dị na ọdịnihu.
Mmemme Sonos Upgrade bụ mmemme iguzosi ike n'ihe ọhụrụ nke na-akwụ ndị ahịa Sonos ogologo oge ụgwọ iji kwalite ma ọ bụ kwalite usoro Sonos ha n'ụlọ. Ndị ahịa ugbu a na-anụ ụtọ ụfọdụ ngwaahịa anyị dị n'elu ha nwere ike ịgbakwunye ndị ọkà okwu Sonos kachasị ọhụrụ na ntọala ha maka ihe ruru 30% kwụsịrị, gụnyere Arc maka imi ihe nkiri ụlọ ma ọ bụ Bugharịa maka n'ime na n'èzí.
Mmemme ezubere maka ndị nweela ma nwee obi ụtọ na ụda ụda Sonos n'ụlọ ha. Ngwaahịa ruru eru maka nkwalite nkwalite gụnyere:
15% ego na ngwaahịa Sonos ọ bụla ọ bụrụ na inwere: Jikọọ: Amp (Gen 2), Jikọọ (Gen 2), Gwuo: 1, Gwuo: 3, Gwuo: 5 (Gen 2), Playbar na Playbase. Ego maka ngwaahịa ruru eru.
30% ego na ngwaahịa Sonos ọ bụla ọ bụrụ na inwere: Jikọọ: Amp (Gen 1), Jikọọ (Gen 1) na Egwuregwu: 5 (Gen 1). Ego maka ngwaahịa ruru eru.
30% ego na Boost: ọ bụrụ na ị nwere Bridge. Ego maka ngwaahịa ruru eru.
Sonos na-emekọ maka Black Friday
N'afọ a, Sonos na-enye ego dị omimi na ezinụlọ ya dum nke ngwaahịa. Ọzọ, anyị na-akọwa onyinye kachasị mma maka ụbọchị ndị a (Nọvemba 26-30):
Ibepu 100 euro en Sonos doo (ugbu a 349 euro) na Sonos sub (ugbu a euro 699) iji gbanwee ime ụlọ gị n'ime ụlọ ihe nkiri kachasị amasị gị.
Ibepu 100 euro en Sonos Bugharịa (ugbu a 299 euro), onye na-ekwu okwu anyị nke na-adịgide adịgide maka ịnụ ụtọ ụda na n'ime ụlọ.
Ibepu 50 euro en Sonos Otu (ugbu a 179 euro) na Sonos Otu SL (ugbu a 149 euro) iji were ahụmịhe ụda na ụlọ na ọkwa ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Sonos Arc na-enweta multichannel LPCM na azụmaahịa Black Friday ọhụrụ
Ihe kachasị mma izu nke Black Friday